8 Stage 12V 20a Automatic Lithium LiFePO4 Battery Charger orinasa sy ny mpamatsy | Ligao
• Switchmode teknolojia: Eny
• Polarity fiarovana: Eny
• Output fohy fiarovana: Eny
• Non rohy bateria fiarovana: Eny
• Over malefaka fiarovana: Eny
• Mihoatra ny hafanana fiarovana: Eny
• elektrônika fiarovana: Eny
• hihena mpankafy: Automatic mari-pana voafehy.
• dreninao malefaka: 220-240V AC, 50 / 60Hz / 110V AC, 50 / 60Hz.
• dreninao hery: 554W
• Misy laharana Output: 12V DC, 20a
• Back tatatra: 4mA
• Minimum nanomboka malefaka: 1.0V
• Ny 8 dingana ireo: Soft Start, ampahany, hisakana ny fiasan'ireny, Fakafakao, vita Maximization, mitsingevana foana.
• Battery isan-karazany: 40-200Ah
• Karazam-vatoaratra: 12V Lithium-Ion LiFePO4 vatoaratra
• mafana hiarovana (mpankafy amin'ny): 65 ℃ +/- 5 ℃.
• fahombiazana: App. 85%.
• mifanaraka tsara fitsipika: CB, taona, IEC60335, EN61000, EN55014
• lafiny (L × W × H): 217 × 116 × 62mm
Over TOSIKARATRA Protection
Izany no tanteraka mandeha ho azy Lithium bateria dovia amin'ny 8 anjara-raharaha dingana.
Automatic fa mamaly ny miaro ny bateria tsy ho overcharged. Noho izany dia afaka mandao ny dovia ny bateria mifandray amin'ny mandrakizay.
8-tsehatra fa mamaly ny dia tena feno sy marina mamaly ny dingana izay manome ny bateria intsony ny fiainana sy ny tsara kokoa raha oharina amin'ny fampiasana fampisehoana lovia nentim-paharazana.
Ny 8-tsehatra lovia Natao ho Lithium-Ion vatoaratra LiFePO4 mampiasa ny teknolojia ihany.
Ny fiampangana dingana mialoha izay mampiditra hery moramora ny bateria. Izany miaro ny bateria, ary mampitombo ny fiainana bateria.
Dingana 2. ampahany
Fa mamaly ny amin'ny Maximum eo ho eo amin'izao fotoana izao raha 90% bateria fahafahana.
Ampahany fomba ny mamaly ny tsingerin'ny. Ny fanombohan'ny dingana mitohy mandra-bateria malefaka ny alalan'ny terminal efa nitsangana mihoatra noho ny fetra napetraka amin'ny izay manondro ny dovia Switches ny ampahany fa mamaly ny.
Raha terminal malefaka tsy nandalo ny malefaka voafetra ao anatin'ny fe-potoana, ny dovia Switches mba tsiny fomba (Dingana 2 jiro mafy) ary discontinues ny mamaly ny. Raha izany no izy, dia diso ny bateria na ny fahaiza-manao lehibe loatra.
Dingana 3 hisakana ny fiasan'ireny
Fa mamaly ny amin'ny fihenan'ny amin'izao fotoana izao mba hahabetsaka hatramin'ny 95% bateria fahafahana.
Dingana 4 Fakafakao.
Hitsapana raha ny bateria dia afaka ho anjara-raharahany. Vatoaratra izay tsy afaka mihazona anjara-raharaha mety mila soloina.
Dingana 5 Mahafeno
Final fiampangana amin'ny mitombo amin'izao fotoana izao.
Dingana 6 Maximization
Niandraikitra farany tamin'ny malefaka indrindra hatramin'ny 100% bateria fahafahana.
Dingana 7 float
Ny dingana mitsingevana mitana ny bateria amin'ny 100% bateria anjara-raharaha tsy overcharging na simba ny bateria. Midika izany fa ny azo sisa dovia mifandray amin'ny bateria mandrakizay.
Dingana 8 foana
Foana ny bateria amin'ny 95% -100% fahafahana. Ny manara-maso ny bateria dovia malefaka sy manome foana rehefa ilaina izany mba hitandrina ny bateria nandrara tanteraka.
Ny 12 Automatic Lithium Battery dovia manan-8- dingana mandeha ho azy tanteraka mamaly ny tsingerin'ny. Ny dovia tonga dia miverina any amin'ny fiandohan'ny ny mamaly ny curve.
Na inona na ny habe na ny karazany, avelao ho any LBC-poana. Hery ho an'ny matihanina.
Taona iray Warranty.
OEM tsy ampy!
Tsara Pre-varotra sy Ankehitriny-varotra rafitra fanompoana.
L 30 taona matihanina Factory Manufacturer in Zhongshan, Sina
Automatic Battery Charger Fa Car
Battery Charger Fa Car
Battery Charger Fa Generator
Battery Charger Fa Toy Car
Battery Charger Amin'ny Hitany
Fa Paslode Battery Charger
Frequency avo Battery Charger
Mitarika Acid Battery Charger 12v
Rechargeable Battery Lovia